बेरुत सहरमा एक जोडी विस्फोट भएको छ – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
अगस्ट 4, 2020 मा, लगभग 2750 मेट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेटको क्यास बेरुत, लेबनानको बन्दरगाहमा अनिश्चित रूपमा भण्डारण भयो र एक विशाल उच्च आदेश विस्फोट भयो जसले प्राचीन शहरको ठूलो भागलाई ध्वस्त पार्यो।
मङ्गलबार साँझ बेरुत सहरमा पहिलो भन्दा धेरै ठूलो विस्फोटको एक जोडी, कम्तिमा 154 व्यक्तिको मृत्यु, 5,000 भन्दा बढी घाइते र व्यापक क्षति भयो। लेबनानका स्वास्थ्य मन्त्री हमाद हसनका अनुसार शुक्रबार १,००० भन्दा बढी मानिसहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ र १२० जना अझै गम्भीर अवस्थामा थिए।
दोस्रो विष्फोटले शहरको बन्दरगाह माथि उचाईमा रातो रङको प्वाल पठायो र एक आघात तरंग सिर्जना गर्यो जसले माइलसम्म गिलास चकनाचुर गर्यो। ठूलो खोज अभियानको बाबजुद, भूमध्यसागरको पूर्वी तटमा रहेको लेबनानको राजधानी सहरमा दर्जनौं अझै बेपत्ता भएको विश्वास गरिन्छ।
अख्तियारहरूले के भयो भनेर एकसाथ टुक्रा पार्दा, हामीलाई के थाहा छ र के थाहा छैन भनेर यहाँ एक नजर छ।
के कारणले भयो विस्फोट ?
यकिन कारण भने खुल्न सकेको छैन तर साँझ ६ बजेतिर बन्दरगाहको गोदाममा आगलागी भएको छ । त्यहाँ दुईवटा विष्फोट भए, एउटा सानो र त्यसको केही सेकेन्ड पछि ठूलो विस्फोटले शहरको धेरै भाग ध्वस्त पारेको थियो।
Tags: apocalypseboomcitycutefunnyizukukatsukikatsuki bakugoukonosubaLord विस्फोट हत्याmidoriyaretroअकिराअरबअरबीइजिप्टइमिरेट्सइराकउद्धरणएनिमेकच्चनकतारकुवेतजापानजोर्डनटाइपोग्राफीडेकुदुबईदेवदारनायकनोस्टालगिजफायरफेरोजबन्हाबाकुगोबाकुगोउबेराउथबेरुतबोकु नो हिरो एकेडेमियाभाषाभिन्टेजमंगामध्य पूर्वमध्य पूर्वीमेगुमिनमेरो हीरो एकेडेमियामोरोक्कोम्हायूएईरातोरेट्रोलेबनानलेबनानीविस्फोटसंगीतसबै शक्तिसाउदी अरबसिरियासुलेखहबिबी
June 13, 2022 by admin Nepali - नेपाली 0
Next Et par eksplosjoner rammet byen Beirut
Previous Een paar explosies trof de stad Beiroet